Achịcha ndị kachasị na-esi nri: otú e si esi agwọ ụmụ ahụhụ - Nchịkọta pesti - 2020
Esi esi na pests, otu esi edozi chin, aphids na moth na osisi
N'okike, ọ dịghị ụmụ ahụhụ na-eri nri nanị na nsị, ma e nwere nnukwu ndepụta nke pests ndị na-ahọrọ iji dozie osisi nke ezinụlọ a: pasili, carrots, celery, na ndị ọzọ.
Otú ọ dị, e nwekwara ụmụ ahụhụ ndị a, nke, n'etiti nhọrọ ndị ọzọ, na-ahọrọ otu osisi a, ya mere a na-akpọ ha pests nke dil. Kedu ihe ndị e kere eke na otu esi esi lụso ha ọgụ, anyị ga-ekwukwa n'ihu.
Otu esi emeso aphids na dill
Ngwurugwu iji merie nla dill
Karọt akwukwo na dil
Otu esi emeso osisi ahụhụ Italy
Ụzọ nke na-emeso karọt ofufe
Esi chebe umu si na pests: ihe mgbochi
Ihe isi ike n'imeso dil na kemikal
Ma ala nke ala na osisi na ala nwere ike imeri. Na mgbọrọgwụ ndị bekee, ndị caterpillars, na akụkụ nke May, beetworms na ụmụ ahụhụ ndị ọzọ na-eyi egwu.
Greenery emetụta bedbugs, aphids, cicadas, akọrọ, thrips na ndị ọzọ bi n'ala. Otú ọ dị, ihe ọ bụla nke pests nke dil, a na-eduzi ọgụ megide ha nanị site na usoro ndị a ma ama.
Mgbe na-eto eto maka oriri, a machibidoro ya iji ọgwụ nje na ọgwụ ọ bụla ọzọ, n'ihi na a na-eji ya na nri, mgbe mgbe n'emeghị ọgwụgwọ.
Ị ma? N'ọtụtụ ọnọdụ, a na-eji dil dị ka ihe si esi. A na-agbakwunye elu ya na ero, akwukwo nri, azụ, efere anụ, nakwa dị ka ọka, nri, soups, salads. Ọzọkwa, a na-agbakwunye ha ngwa ngwa mgbe nkwadebe nke efere ahụ, ebe ọ bụ na mgbe ọgwụgwọ okpomọkụ gasịrị, ọ na-efunahụ ya. A na-eji ogwu mmiri eme ihe na ichebe na aromatization nke mmanya. A na-eji mkpị akwụkwọ mịrị amị eme ihe ọ bụghị nanị dị ka ihe si na-edozi onwe ya, kama ọ gbakwụnyekwara na ngwakọta nke herbs.
Ya mere, na-echebara ihe ndị a echiche, a pụrụ iji ọgwụ pesticides mee ihe nanị ma ọ bụrụ na etolite eto maka mkpụrụ.
Na-emetụtakarị dil karọt aphidnke kachasị amasị mmasị ịbanye na ogbe mmanụ na akwukwo nri siri ike. Nke a bụ obere ahụhụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-eri na osisi sap, a pụrụ ịchọta ya na elu ntụ, site na ebe o siri ike iji nweta ya tupu ya eji osisi ahụ nri. Mkpuru ahu n'onwe ya abughi nsi, ma obughi onye obula nwere obi uto maka ohere iri nri na aphids.
Ọ dị mkpa! Na mgbakwunye na pests, ihe ize ndụ nke dil na-anọchi anya ọrịa dị iche iche, karịsịa na greenhouses. Ya mere, mgbe ị na-eto eto, jidesie nkà na ụzụ nke usoro a ike. Jiri nlezianya na-eto eto na greenhouses: mmiri nke ọma, mgbe ikuku, na-ekpo ọkụ na 50%, na okpomọkụ - + 15 ... 20 ° C].
Nhazi usoro na pests ndị a kọwara na spraying ahụ kụrụ na dị iche iche tinctures: dịka ọmụmaatụ, site na tomato ma ọ bụ akwụkwọ nduku, ụtaba. Aphid nwere ihe mkpuchi dị oke mkpa nke ga-esi na ya nweta ego kachasị ike.
Potato n'elu Solanine nwere nsi, nke nwere mmetụta ọjọọ na tl, ya mere, iji kwadebe ihe ọkpụkpụ, ọ dị mkpa iji ọkara ruo kilogram abụọ nke ihe oriri nke poteto ma ọ bụ tomato, gbanye ha ma wụsa ha na ịwụ mmiri.
Mgbe ahụ, a kwadebere ngwakọta maka ọkara otu awa ma ọ bụ na-esi ọnwụ ma ọ dịkarịa ala awa atọ. Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ na-anọgide na-agbakwunye 30 - 40 g ncha nchara ma ọ bụ 30 ml mmiri mmiri, nke ga-ejide jupụta na osisi ma kesaa ya nke ọma. A na-eme nri na ụtụtụ na mgbede.
Na osisi ụtaba Nicotine na-ebibi ahụhụ ahụ. N'okwu a, iji mee ka ọ bụrụ ihe nkedo, a gweriri 100 g nke epupụta nke osisi ahụ ma wụsara ya mmiri mmiri. Ọ dị mkpa ịnwagide ya maka otu ụbọchị, mezie ma gbakwunyekwa ncha. Dị ka ihe ndabere, ị nwere ike iji ala ala celandine, ose na-ekpo ọkụ, feverfew. Mgbe a na-efesa ya, tupu o jiri ya mee ihe, ọ ghaghị idozi ya nke ọma n'okpuru mmiri iyi siri ike.
A makwa ahụhụ ahụ nri karọt. Nke a bụ ntakịrị, ruo nru ububa 19 mm na nku uhie na-acha uhie uhie. Na mkpokọta, e nwere ihe kariri 100 n'ime ụdị ya, ya mere o nwere ike ịdị iche na nke ahụ edororịrị mbụ.
Caterpillars nke ụmụ ahụhụ ahụ, nke na-anọchite anya ihe ize ndụ nke dil, nwere eriri ọbara ọbara, nke dị obere n'etiti ndụ. Dabere na ọnọdụ ihu igwe, otu nwanyị maka otu afọ nwere ike ịba site na otu ruo ọgbọ atọ nke obere nje.
Ihe ize ndụ nke ahụhụ bụ na caterpillars na-edozi na mkpụrụ nke osisi, na-eri nri na mkpụrụ osisi, na-akwa ákwà ma na-edozi ụmụ. N'ezie, ya mere aha ọzọ nke pesti - ụda nche anwụ
Ọ na - abụkarị ọgụ siri ike megide ụmụ ahụhụ, ebe ọ bụ na ngwa ngwa a na - emetụta osisi ọkụ ma gbaa ya ọkụ. Ọ dị mkpa ka ịpịa ụmụ anụmanụ na-edozi ahụ na oge, yana dịka ihe mgbochi, mebie ihe nchebe ọhịa na mpaghara ahụ ka ahụhụ ahụ ghara ịgafe na saịtị gị.
Carrot listobloshka - ahụhụ nke nwere obere akpụkpọ anụ, nke ruru 2 mm n'ogologo ma wepụ nku uhie. O nwere anya uhie, ogologo antennae ogologo oge, na-awụda ụkwụ ụkwụ. Ịtọ akwa àkwá ọcha, nke na-eto eto ka ha tozuru. Ruo otu afọ, ndepụta ndepụta depụta otu ọgbọ Na-atụgharị na karọt ọhịa ma ọ bụ ihe nkwụ. Mmezi nke nwanyi mgbe oyi malitere na May.
Nfe a dị ize ndụ n'oge ọ bụla nke mmepe ya. Nymphs, larvae na ndị okenye na-eji mmiri ara na-aṅụ ihe ọṅụṅụ ahụ site na mkpuru ahịhịa na osisi nke osisi ahụ. Ọtụtụ mgbe edozi na-eto eto Ome, ya mere, dil akwụsị na-eto eto, na elu curl na deform, wee nkụ.
Ọ dị mkpa! Ọ ka mma iji ọgwụ mgbochi na-eji ọgwụ ọjọọ a eme ihe, ka emesịa i ghaghị eche ogologo oge gbasara otu esi alụ ọgụ ya n'ụzọ ka njọ. Ọ dị mkpa iji wepụ ihe niile ọkụkụ nke carrots na coniferous na nso ebe ebe a na-eto eto, ma ọ bụrụ na nke a agaghị ekwe omume, kpuchie osisi na spunbond ma ọ bụ lutrasil na mgbanaka mbụ. Dika ogwu na-etolite, o di mkpa iji wepu ala, na-agha ahihia ma jiri oru ugbo ndi ozo.
Nhazi usoro na-etinye aka na ịpịcha mmanụma na-eme ka a ghara ịkụnye ya ụta, ụtaba ụtaba ma ọ bụ ihe ịchọ mma nke ụtaba. Iji kwadebe nke ikpeazụ ahụ, ịkwesịrị ịkwadebe kilogram nke ụtaba ma ọ bụ ihe mkpofu ya, wụsa ịwụ mmiri ọkụ (ọ bụghị mmiri na-esi na mmiri) ma sie ike ruo awa 24. Na infusion filtered diluted ncha na ugbua a ngwakọta na-sprayed na dil.
A na - akpọkarị ụmụ ahụhụ a na - emerụ ahụ ọfụma ejiji. A na-arụ ọrụ na mbubreyo nke April, mgbe ndị okenye topụtara site na ihe ọkụkụ nke afọ gara aga ma dozie na osisi mbụ. Mgbe celery na-etolite, ha na-agafe ha, ebe ha ji nwayọọ nwayọọ dọọ nsen malite na mmalite ruo n'oge etiti.
Nke a pụtara na mkpịsị ahụhụ na-egosi na ọ bụ oge niile nke afọ. Dị ka ndị toro eto, ha na-eri nri na okooko osisi na mkpụrụ osisi, nke na-emerụ ihe ọkụkụ ahụ.
Agha megide grafizom nke nwere akpa (aha ọjọọ ọzọ) anaghị achọ ọrụ ndị dị mkpa. N'oge oge ahụ, a na-etinye ụmụ ahụhụ n'elu osisi ahụ, n'ihi ya, ha nwere ike ịmalite ngwa ngwa na ịwụ mmiri ma ọ bụ tụnye ya n'elu ma wụnye ya na mmiri.
Iji gbochie ihe omume nke ahụhụ na saịtị ahụ, ọ dị mkpa iji bibie osisi ọhịa dị nso na ya, nke sitere na ndị ezinụlọ nke Umbrella, na-agbaso iwu nke nchịkọta ihe ubi na ntinye nke celery.
Dika ekwuru ya, icha di ka ihe ndi ozo bu nke carrots karọt ada - obere ụmụ ahụhụ na-acha uhie uhie na nku uzo. Kwuo ya Ị nwere ike, gbasaa ngwakọta pụrụ iche n'etiti ahịrị nke dil. Maka nkwadebe ya, ha na-eji okpukpu abụọ tụọ egwu, ash ash na ụtaba siga.
A ga-eji 5 g nke ngwakọta ga-eji kwa square mita. A na-eme ọgwụgwọ ugboro abụọ ma ọ bụ ugboro atọ kwa ụbọchị 8 ruo 10. O gosipụtara onwe ya nke ọma n'ịlụ ọgụ megide pests na infusion nke tomato n'elu kwadebere dịka nchịkọta dị n'elu.
Dị ka prophylaxis Iji wepu ahụhụ, gbanye osisi ahụ na infusion nke garlic, yabasị, burdock, wormwood, yarrow ma ọ bụ chamomile. Iji mee nke a, were 200 - 300 g nke ihe ndị a họọrọ, kpochachaa ma wụsa lita 2 nke mmiri ọkụ (ọ bụghị esi mmiri).
Ọ dị mkpa ịnwagide ọgwụgwọ maka ọ dịkarịa ala otu ụbọchị, mgbe e mesịrị, a na-ehichapụ ya, na tupu ejiri mmiri tinye (ọ bụghị naanị ịwụ) na 30-40 g ncha. Aja siri ike site na osisi ndị a na-eji eme ihe ga-anọgide n'ime 4-5 ụbọchị, nke ga-emenye ụjọ.
Ị ma? A naghị eme ka ihe ọkụkụ sie ike karị na nke na-emetụtaghị pests. Ya mere, ka oge na-aga na-etinye akwa akwa ma ghara ichefu iji jide n'aka na ha anaghị apụta ahịhịa. Ịgbara kwesịrị ịdị na-agafeghị oke, na-enweghị sprinkling. Karọt fly anaghị amasị ala peat, ya mere, ma ọ bụrụ na enwere ike ịkwacha ya na ọkpụkpụ ya, ọ ka mma ijide ya.
Mgbochi kachasị mkpa na nke a - ikwekọ na iwu nke na-eto eto. Cheta na osisi nke nche anwụ nke otu afọ ga-akụ n'ugbo dị anya site na osisi nke otu ezinụlọ ahụ, mana afọ abụọ. Ịkwesịrị iji nlezianya kpochapụ ata niile dị na nche anwụ.
Jide n'aka na ị ga-ewepụ ihe niile fọdụrụ na osisi ahụ, tụda akwụkwọ, ma gwuo ala maka oyi. N'oge ị na-akọ ihe na-eme ka agrotechnology na-emeghachi omume n'oge na-aga n'ihu n'ọdịdị nke ụmụ ahụhụ na-achọghị.
Nri adịghị enwe pests ndị dị ize ndụ, ma mgbe ụfọdụ, ụmụ ahụhụ na-etinye na ya, nke kachasị mma nke ezinụlọ nke ndị na-ahụ maka nche anwụ. Ịlụso ha ọgụ dị mfe. E nwere ọtụtụ ntụziaka decoctions na infusions nke na-emenye ụjọ ha.
A ghaghị icheta na mmiri ọgwụ na ọgwụ pesticides adịghị etinye aka na dil, dịka a na-eji ya na nri ndị a na-adịghị echebe. Ihe kachasị mma maka nchịkwa na-agwọ ọrịa bụ mgbochi na, karịa ihe niile, oru ugbo kwesiri ekwesighi.